मोबाईल कम्पनी हुआवेसँग किन डराउँदैछ अमेरिका ? – Everest Dainik – News from Nepal
मोबाईल कम्पनी हुआवेसँग किन डराउँदैछ अमेरिका ?
जापान, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड जस्ता शक्तिशाली देशहरुले हुआवेका उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्
स्मार्टफोन बनाउने संसारको दोश्रो ठूलो कम्पनी हुआवेसँग कुनै पनि देशले इष्या गर्न सक्छ ।
चीनको यो कम्पनीले स्मार्टफोन मात्रै बनाउँदैन बरु यसले इन्टरनेट राउटर्स र सर्भर जस्ता अनेक उत्पादन गर्ने गर्दछ ।
अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड जस्ता शक्तिशाली देशहरुले भने हुआवेका यी उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यसैगरी ब्रिटेन, क्यानाडा र जर्मनी जस्ता देशहरु हुआवेका उत्पादनहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।
यस्तोमा प्रश्न उठछ– आखिर संसारका विकसित देशहरु किन यो कम्पनीको उत्पादनकाविरुद्ध छन् ?
केछ यी देशहरुको चिन्ता ?
इन्टरनेटको संसार फोर जीभन्दा अघि बढेर फाइभ जीमा प्रवेश गरिरहेको छ ।
सरल शब्दमा भन्दा फाइभ जी इन्टरनेट हाम्रो संसारलाई पूर्णरुपमा बदल्ने छ । इन्टरनेटको स्पीड अहिलेको तुलनामा कैयन गुणा बढी हुने छ ।
जतिखेर ‘इन्टरनेट अफ थिङ्स’को युग शुरु हुनेछ त्यो बेला अटोमोटेड कारदेखि सबै घरेलु उत्पादन र हाम्रो सहरको निगरानी गर्ने ड्रोन समेत एक अर्कोसँग जोडिने छन् ।
यो अवस्थामा सूचनाको आदान प्रदान जुन उत्पादनबाट भएर प्रसार हुनेछ, ती उत्पादन भने संसारका केही सीमित कम्पनीले मात्रै बनाउछन् ।
तर हुआवोइ भने यो क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल छ । मंगलबार हुआवेले संसारभरीका फाइभ जीसँग जोडिएको २५ प्रतिशत सम्झौता आफूसँग भएको घोषणा समेत गरेको छ ।
हुआवेका बारेमा चीन सरकारले यो कम्पनीका उपकरणको मद्दतबाट अरु देशका जासुसी जानकारी हासिल गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।
फाइनान्सियल टाइम्सको एउटा रिपोर्टमा हुआवेका उप निर्देशक केन हूको भनाई उद्दृत गर्दै लेखिएको छ, “चीनको यो कम्पनीले मंगलबारका दिन उसँग फाइभ जी इन्टरनेटका २५ प्रतिशत सम्झौता रहेको घोषणा गरेको छ । यद्यपी केही बजारमा भने हुआवे विरुद्ध डर उत्पन्न गराउने कोशिस गरिएको छ । औद्यौगिक बृद्धिलाई प्रभावित गर्न राजनीतिको सहारा लिइएको छ । तर हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौं– अहिले पनि ग्राहकले हामीमाथि नै विश्वास गर्छन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो उत्पादनबाट सुरक्षाा खतरा उत्पन्न हुने कुरा गर्नुभन्दा तथ्यमा ध्यान दिनु राम्रो होला । र, तथ्यहरुले हाम्रो उत्पादन पूर्णरुपमा सुरक्षित भएको देखाउँछन् ।”
हुआवेले यी आशंकाहरुको जवाफमा आफू एउटा स्वतन्त्र कम्पनी भएको र चीन सरकारले कम्पनीलाई केही नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
सन् २०१२ मा अमेरिकी संसदमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त रिपोर्टमा हुआवे कम्पनीले चीन सरकारसँग आफने सम्बन्ध सार्वजनिक गर्न सहज नभएको उल्लेख छ ।
उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ, “हुआवेले यो जाँचको बेला अनुसन्धान समितिलाईसहयोग गरेन । र, कम्पनीले चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग
आफ्नो सम्बन्ध पनि सार्वजनिक गर्न चाहन्न । यस्तो प्रमाण पनि अगाडि देखिएका छन् जसबाट यो कम्पनीले अमेरिकी कानुनको पनि पालना गर्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।”
यो रिपोर्ट प्रस्तुत भएपछि अमेरिका सरकारले आफ्नो फाएव आई ग्रूप भनिने सहयोगी देशसँग मिलेर यो कम्पनीमाथि लगाउने कोशीस गरेको थियो ।
यो कम्पनीमाथि सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिबन्ध भने जापानले लगाएको छ ।
कसरी सम्भव छ जासुसी ?
एउटा प्रश्न के उठछ भने यदि यो कम्पनी आफ्नो प्रविधिका माध्यमबाट डाटा हासिल गर्न सफल भएपनि यसबाट कुनै देशको सुरक्षामा के अर्थ राख्छ ?
भारतीय विश्लेषक प्रशान्त राय यो सवालको जवाफमा भन्छन्, “मानौ दिल्लीको भिभिआईपी क्षेत्रका दुई टावरबीच २४ घण्टाको बीच कुनै एक समयमा डाटाको निकै बढी आदान प्रदान हुन्छ भने यो प्याटर्नको आधारमा डाटालाई इन्टरसेप्ट गर्न सकिन्छ । जुन कुनै संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानका लागि निकै जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।”
चीन र अमेरिका बीच विवाद ?
सन् १९८७ मा शुरु भएको हुआवे कम्पनी ३१ वर्षको छोटो अवधिमा संसारको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम उपकरण बनाउने कम्पनी बनिसकेको छ ।
चिनियाँ सेनाका अधिकारी रेन जेन फेईले चीनको अस्तव्यस्त टेलिकम क्षेत्रको अवस्थामा सुधार गर्न यो कम्पनी शुरु गरेका थिए ।
तर अहिले भने चीनमा हुआवेलाई राष्ट्रिय गौरवजस्तै हेर्ने गरिन्छ । किनभने इन्टरनेट प्रसारणका लागि आवश्यक सबै उत्पादहरु यसै कम्पनीले उत्पादन गर्दछ ।
रेन जेनफेई अहिले पनि हुआवेका अध्यक्ष छन् । उनकी छोरी मेङ वाङ्जोलाई गत डिसेम्बर १ तारिखका दिन क्यानाडाबाट गिरफ्तार गरिएको थियो ।
क्यानाडाको अदालतमा मेङले हुआवेको उप कम्पनी स्काइकमको मद्दतबाट सन् २००९ देखि २०१४ को बीचमा अमेरिकी प्रतिबन्धलाई छल्न मद्दत गरेको तर्क पेश गरिएको थियो ।
मेङ्जोमाथि अमेरिकी बैंकमा स्काइकम र हुआवेलाई फरक कम्पनीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको आरोप पनि छ । जबकि दुबै एउटै कम्पनी हुन ।
द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार, न्यूयोर्कको एउटा अदालतले २२ अगस्तका दिन मेङलाई पक्राऊ गर्न वारेन्ट जारी गरेको थियो । क्यानाडा र अमेरिकामा प्रत्यर्पण सन्धी भएको कारण मेङलाई गिरफ्तार गरेपछि अमेरिका पठाउन क्यानाडा सरकारले तयारी शुरु गरेको छ ।
उनलाई अमेरिका लगेपछि उनीविरुद्ध कैयन आर्थिक संस्थाहरुसँग घोटाला गरेको षडयन्त्र गर्ने अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सकिन्छ । यी अपराधमा
दोष ठहर भए उनलाई ३० वर्षको सजाय हुन सक्छ ।
यसअघि चीनमा एकजना पूर्व कुटनीतिज्ञलाई हिरासतमा लिइएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
वाशिङटन पोष्टका अनुसार, चीनले माइकल कोभरिग र माइकल स्पोभर नाम गरेका दुई जना क्यानाडेली नागरिकलाई पक्राउ गर्दै उनीहरु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको आरोप लगाएको थियो ।
क्यानाडाको अदालतले अहिले भने मेङलाई जमानतमा रिहा गरेको छ । उनको अर्को पेशी आगामी फेब्रुअरी ६ तारिखमा रहेको छ ।
मेङको गिरफ्तथारीमाथि चीन सरकारको कडा प्रतिक्रिया आएपछि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जष्टिनले यसमा कुनै राजनीतिक संलग्नता नभएको स्पष्ट गरेका थिए । न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार, अमेरिकी सरकारका व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाइजरले भने मेङको गिरफ्तारी क्रिमिनल जष्टिस सिष्टम अन्तर्गत गरिएकोले यो उनको कामभन्दा बिल्कूल भिन्न रहेको बताएका छन् ।
जी २० को सम्मेलनको बेला चीन अमेरिका व्यापार युद्दलाई ९० दिनका लागि रोक्ने द्विपक्षीय सम्झौतामा लाइटहाइजरले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
यस्तोमा मेङको गिरफ्तारीमाथि चीनले के कस्तो कडा कदम चाल्ला भन्ने विषय भने प्रतिक्षामा नै रहेको छ ।
बिबिसि हिन्दीमा प्रकाशित आलेखको सम्पादित अनुवाद
एनएमबि बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, केमा कति ?